Momba anay - Dongguan Sunkia Machinery Co., Ltd.
Masinina Laminating Opp Automatic
Machine Laminating Window mandeha ho azy
Machine Laminating sy Coating mandeha ho azy
Machine Laminating Thermal mandeha ho azy
Machine UV Varnishing mandeha ho azy
Masinina Varnishing sy Kalandrie mandeha ho azy
Masinina UV Varnishing Uv-loha efatra haingam-pandeha
Masinina varnishing UV Spot Automatic
Masinina kalandrie haingam-pandeha
Guangdong Sunkia Machinery&Technology CO.,LTD
Ny milinanay dia malaza sy ambony tomban'ny mpanjifa an-trano sy any ivelany.
Sunkia Machinery dia mpanamboatra malaza izay nifantoka tamin'ny fampandrosoana sy ny famokarana milina post-gazety avo lenta nandritra ny 12 taona. Orinasa teknolojia avo lenta izahay izay manana teknolojia patente amin'ny milina laminating multi-function. milina fametahana taratasy manan-tsaina. Ny milina dia manana taratasy fanamarinana CE. Any amin'ny tanànan'i Dalingshan, Tanànan'i Dongguan, Faritanin'i Guangdong no misy anay, izay manana ekipa famokarana voalohany, rafitra fiantohana kalitao tonga lafatra, ary ekipa fikarohana sy fampandrosoana ara-teknika matanjaka. Orinasa voamarina ISO izahay.
Nanantitrantitra ny fitsipiky ny "Ny kalitao, ny fahatokisana ary ny fitiavana" Hatramin'ny niorenany tamin'ny taona 2008. Saika maro ny fanavaozana lehibe nandritra ny 12 taona farany ary lasa marika malaza any Shina. Mitombo hatrany ny orinasanay ary ny kalitao sy ny serivisy dia mahazo fankasitrahana lehibe avy amin'ny mpanjifa na amin'ny tsenan'i Shina na amin'ny tsena iraisam-pirenena. mpitarika eo amin'ny sehatra misy azy ary natokana amin'ny famokarana teknolojia fametahana taratasy sy ny fitaovana avo lenta indrindra ho an'ny orinasam-panontana maro sy orinasam-panjakana.
Ny tena vokatray dia mandeha ho azy OPP laminating milina automatique UV varnishing milina, Multi-miasa varavarankely laminating milina, High-hafainganam-pandeha horonan-taratasy ho an'ny horonana milina, hafainganam-pandeha ambony calendering milina, Hentitra sy fanomezana boaty famokarana fitaovana, ary mifandray hafa post-gazety milina. Tena ankasitrahana sy derain'ny mpanjifa izahay. Izy no orinasa lehibe indrindra amin'ny indostrian'ny fonosana. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia nitazona fiaraha-miasa tsara amin'ny orinasa mavesatra ao an-toerana sy vahiny maro. Ny orinasanay dia mikatsaka ny fahombiazan'ny fitantanana, ny fahavelomana amin'ny kalitao, ary ny fampandrosoana amin'ny laza, ary manatsara ny kalitao sy ny soatoavin'ny vokatra, manaraka ny filozofian'ny orinasa mifantoka amin'ny mpanjifa sy mandresy. Tongasoa eto aminay ary miarahaba anay. Misaotra anao.
Ny tanjonay dia ny hamaha ny vokatra fonosana taratasy ary hampiasa ny teknika mba hanatratrarana ny tanjona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana azo simba / azo recycled sy Maitso, izay misy fiantraikany lavitra amin'ny indostrian'ny famonosana sy fanontam-pirinty ho avy. Ny tanjonay dia ny hanome milina fanaingoana eny ambonin'ny fonosana, milina miampy sanda ambony, fanavaozana tsy tapaka, zava-bitan'ny mpanjifa, fahavitan-tena.
745# Shida Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong, Sina
famandrihana amin'ny Gazety